भगवती ढुंगेलको म्यूजिक भिडियो बजारमा - Jhapa Online
भगवती ढुंगेलको म्यूजिक भिडियो बजारमा
झापा, २८ असोज । उपन्यासकार, गीतकार तथा कलाकार भगवती ढुङ्गेलले आफ्नो गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । उनले हालै युट्युव मार्फत ‘न पिउँ त’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । राज सागरले गाएको उक्त गीत प्रेम सम्बन्धलाई लिएर उनले लेखेकी हुन् ।
सो गीतमा राज सागरले संगीत भरेका छन् । भने मोडलका रुपमा भगवती ढुंगेल स्वयम् देखिएकी छिन् । त्यस्तै म्यूजिक भिडियोमा मुख्य पात्रका रुपमा मोडल जनक खड्काले अभिनय गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोमा भुवन मेचेको पनि अभिनय देख्न सकिन्छ । कृष्ण तामाङको निर्देशनमा रहेको उक्त गीत नयाँ पुस्ताले रुचाएका छन् । प्रेम अनि धोकालाई शव्दमा उतारेकी भगवतीले आफूलाई मोडलका रुपमा पनि स्थापित गराएकी छिन् । भगवतीका तीनवटा गीत बजारमा आइसकेका छन् । जसमा ‘मधुशाला बन्यो’ र ‘हाँसौ कसरी’ यस अघि नै सार्वजनिक भईसकेको छ । ती गीतले पनि निक्कै चर्चा पाएको छ ।
उपन्यासकार, गीतकार तथा कलाकार भगवती ढुङ्गेलका निक्कै कृतिहरु बजारमा पाईन्छन् । केही पढ्न र केही युटुब मार्फत हेर्न सकिन्छ । उनले वि.स. २०७५ सालमा आप्mना दुई उपन्यास ‘आधा सत्य’ र ‘प्रेमिल’ बजारमा ल्याइन् । पाठकले उनका दुवै कृति मनपराए ।
वि.स. २०७६ सालमा उपन्यासकार, गायक, गितकार तथा कलाकार मातृका प्रसाद संग्रौलाको पहिलो र दोस्रो म्युजिक भिडियोबाट आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गर्दै अभिनयमा पनि आफूलाई अब्बल सावित गराइन् । साहित्यकार भगवती कथा, कविता, गजल, गीत लेख्न मन पराउँछिन् । उनलाई विषेशत उपन्यासमा कलम चलाउन बढी मन लाग्ने बताउँछिन् । उनले केही कृति चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन् ।
मोरङमा करेन्ट लागेर एक युवाको मृत्यु